Tower tube bir warshadeeyayaasha - China steel tube tower Warshada, alaab-qeybiyeyaal
30m 3 lugood tuubooyin bir telecom munaarad
Halkan ka eeg, iibka ugu wayn ee soo saaraha munaaradda isgaadhsiinta & alaab-qeybiyaha iyo dhoofiyaha koonfurta china
Taawar Isgaadhsiinta Tubularka Birta
Halkan ka hel,iibka ugu wayn ee soo saaraha munaaradda isgaadhsiinta iyo dhoofiyaha koonfurta china.warshada Shiinaha,damaanad qaadka tayada.
4-Lug Tubular Steel Lattice Tower
Adeeg hal-joojin ah oo loogu talagalay naqshadaynta, wax-soo-saarka iyo iibinta munaaradda isgaadhsiinta, Toos u ah Warshada, Soo-saareha Shiinaha, Soo-saareha iyo Soo-saareha, Ogow Sawirro Dheeraad ah, Weydiiso!
4-lugood Tubular Tower Double Platform
Soo saaraha Shiinaha & dhoofiyaha ee 10kV ~ 500kV munaaradda danab sare iyo qaab dhismeedka birta, shirkadda shahaado ISO, warshad Shiinaha si toos ah,weydii hadda!
Adeeg hal-joojin ah oo loogu talagalay naqshadaynta, wax-soo-saarka iyo iibinta munaaradda baahinta, Toos u ah Warshada, Soo-saareha Shiinaha, Soo-saare iyo Wax-soo-saare, Ogow Sawirro Dheeraad ah, Weydiiso!
3-Lug Tubular Steel Lattice Tower
3-lugood Tubular Tower
Ku soo dhawoow inaad booqato mareegahayaga.XY Tower waa mid ka mid ah shirkadaha hormuudka ka ah warshadaha wax soo saarka munaaradaha ee galbeedka Shiinaha.
Tower XY waxay bixisaa qaabab kala duwan oo bir galvanized ah, oo ku takhasusay munaaradda gudbinta, qaab dhismeedka substation, munaaradda isgaarsiinta, iwm. Iyadoo koox shaqaale ah oo dhiirigeliyay, waxaan sameyneynaa ballanqaad si aan u bixinno tayada tayada iyo adeegga xirfadeed ee dhammaan macaamiisheena.Waxaan si daacad ah u rajeyneynaa wadashaqeyn.